अगुवाहरुले ध्यान नपुर्‍याउंदा डाक्टर दम्पतिको सम्बन्ध अवशान उन्मुख – Ankush Daily
अगुवाहरुले ध्यान नपुर्‍याउंदा डाक्टर दम्पतिको सम्बन्ध अवशान उन्मुख
On २६ जेष्ठ २०७६, आईतवार १८:३१
वीरगन्ज, २६ जेष्ठ ।
डा. निलम साह र डा. राजेश साह प्रकरणमा अगुवाहरुले ध्यान नपुर्‍याउँदा यो घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतले डा.निलम साहको हकमा बैशाख १६ गते घरेलु हिंसा मुद्दामा डा. निलमलाई कुटपीट गर्ने, शारीरिक तथा मानसीक यातना दिने, स्वास्थ्य उपचार हेरचाह नगर्ने, संचार माध्यमद्धारा दुख दिने वा संताउने कार्य नगर्ने लगायत निज बासोबास गरी आएको स्थानबाट निकाला गर्ने समेतको कार्य नगर्न भनी गम्भिरा साह तेली उनको श्रीमति सावित्री देवी तेली र डा. निलमको पति डा.राजेश कुमार साहलाई आदेश दिएको थियो ।
अंशबाण्डा गरी सकेका आफना बुवा गम्भिरा साहको अंशमा परेको घरमा उनकी श्रीमती डा. निलम साहले बैशाख १९ गते केही मानव अधिकारवादी, संचारकर्मी, प्रहरीको उपस्थितीमा ताला फोडोर बस्दै नबसेको घरमा जबरजस्ती प्रवेश गरेर बस्न थालेपछि उनका ससुरा गम्भिरा साह र सासु सावित्री देवी घरबाट बाहिरिए । अदालतको आदेश अनुसार डा.निलम जहा बसेकी थिइन त्यहाबाट ननिकाल्नु भनिएकोमा बस्दै नबसेको ठाउँमा जर्बजस्ती प्रवेश गराइयो र यो प्रकरणमा डा. निलमको सासु, ससुरा र श्रीमानलाई खलनायकको रुपमा मीडियामा प्रस्तुत गर्ने काम भयो ।
अदालतले यस्तो आदेश जारी गर्दा डा .निलम साह नेशनल मेकिडकल कलेजमा कार्यरत थिइन र त्यही क्वार्टरमा बस्दै आएको कुरालाई गौन बनाइयो र उनी आफनो श्रीमानको समेतको हक नलाग्ने मेनरोडको घरमा जोरजुलुम गरेर प्रवेश गरेको कुरालाई बहादुरीका साथ प्रस्तुत गरेर श्रीमान श्रीमति बीच अझ फाँटो ल्याउने काम मीडियाका साथीहरुद्वारा गराइयो । यस कार्यमा उनलाई मानव अधिकारवादी र प्रहरीले समेत सहयोग गरेको थियो ।
डा .निलम साहको प्रवेश पछि गम्भिरा दम्पतीले मेनरोडको त्यो घर छाडेर महिना दिन देखी बाहिर बसीरहेका थिए । तर शनिबार डा. निलमका पिता डा. निरन्जन साहले समस्या सल्टाउनको निम्ति आफ्ना सम्धी गम्भिरा साहलाई फोन गरि घर तपाईकै हो छोडेर किन जानु परेको थियो र ? आउनुहोस तपाईको घरमा तपाईलाई स्वागत छ । उनले गरेको आग्रहकै कारण जेठ २६ गते आइतवार बिहान श्रीमती सहित आफनो घर पुगेका साहलाई बुहारी डा.निलमले ढोका नखोली अपमानित गरिन् ।
वडा अध्यक्ष ध्रुव नेपाल र अन्य गन्यमान्य व्यक्तिको रोहबरमा गम्भिरा साहले ताल्चा फोडेर आफनो घर भित्र प्रवेश गरेका थिए । आफनो घर भित्र एक महिना ७ दिन पछि प्रवेश गरेका साह त्यतीबेला आश्चर्यमा परे ताल्चा लगाईएको कोठाको ढोका खुला थियो । भित्रको दृश्यले उनलाई झनै अचम्ममा पार्‍यो । उनको दराजका ढोका खुला थिए । त्यसमा रहेको सुनका गरगहना र महत्वपूर्ण कागजातहरु गायब बनाइएको उनको आरोप रहेको छ ।
सासु ससुरालाई घरमा स्वागत गर्न चाहन्छु भनेर युटुबमार्फत निम्ता दिने डा. निलमले घर प्रवेश गर्दा भौतीक अवरोध सृजना गरेर सासु सावित्री देवीलाई घाइते तुल्याएको उनका ससुरा गम्भिरा साहको आरोप रहेको छ । यस बिषयमा डा.निरन्जन साहको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दा उनी काम बिशेषले भारत तर्फ गएको जानकारी प्राप्त भयो ।
श्रीमान र श्रीमती बीच भएको सामान्य मनमुटाव बढेर ठूलो रुप धारण गरी सकेको छ । तेली समाजका अगुवाहरु घटना मिलाउनु भन्दा चर्काएर आफनो दुनो सोझ्याउने खेलमा लागि परेकोले पनि एउटा शिक्षीत र प्रतिष्ठिीत पेशामा संलग्न ब्यक्तिहरुको सम्बन्ध दुःख अवसानको नजिक पुगेको छ ।